Ny kajy Alimony (ankizy fanohanana) - Alemaina mpisolovava an-tserasera. Ny lehibe indrindra ara-dalàna ny vavahadin-tserasera.
Ny kajy Alimony (ankizy fanohanana)
Ao ny raharaha ny jobholders (mpiasa, mpiasa, mpiasa sy ny mpiasam-panjakana ho an'ny mpiasam-panjakana) dia ny vola miditra isam-bolana taorian'ny deduction ny hetra sy ny fiantohana ara-tsosialy ny fandraisana anjarasy. Tambin-karamany sy ny fandoavam-bola dia severance tafiditra ao ihany koa. Ao ny raharaha ny tena-miasa tao anatin'ny taona ara-bola niteraka net profit dia ny fanapahan-kevitra zava-dehibe. Ao amin'ny raharaha lehibe kokoa eo amin'ny ny fidiram-bola ny eo ho eo anatin'ny telo raharaham-barotra ampiasaina taona. Ao ny raharaha ny tsy fananana asa, ny tsy fisian'ny asa soa maneho ny hetra fototra Ny tsy an'asa, ny tsy an'asa ny olona mandray ny vola fanampiana ny Fianakaviana, raha toa ka mandray anjara amin'ny fikolokoloana ny iray na mihoatra ny olona sy ho an 'ny mpikambana ao amin' ny fianakaviana izay mitondra ny lohateny hoe ny vola fanampiana ny fianakaviana, ary izany dia tsy ny asan ny tratra fidiram-bola mihoatra ny iray volana, ny de minimis fetra. Koa, ny Fisotroan-dronono dia heverina ho toy ny vola miditra, ka misotro ronono ny vola Fisotroan-dronono ao ny raharaha ny misotro ronono ny fototry ny kajy ny fikojakojana. Ny kajy ara-bola fikojakojana ny raharaha-lalàna, ny manaraka isan-jato no nametraka ny tahan'ny: Ny tokotokony sy tsy manan-kery tombana momba ny vola andrasana ny fikojakojana ny vola ho an'ny zaza fikojakojana fanaovana kajy dia mamela ny Aotrisy-miasa amin'ny antoko ho an'ny tanora ny fifanampiana. Ao ny raharaha ny Fiovana ny toe-javatra (toy izany satria ny nahazo ray aman-dreny dia mendrika ho an'ny fikojakojana ny fametrahana dia be na kely na be kokoa) azo ampiharina ho an'ny iray Reassessment ny fikojakojana amin ny fitsarana ao amin'ny distrikan'i izay ny ankizy dia manana ny fahazarana ponenana (na ny olon-dehibe ny ankizy ny trano fonenana). Izany ihany koa ny ankizy sy Tanora ny fiahiana ny andrim-panjakana, aloha tanora fifanampiana manamboninahitra (tanora fifanampiana an'ny birao), dia nahazo lalana. Ny fianakaviana ny vola fanampiana dia, amin'ny ampahany, ho milina manohitra ny fikojakojana ny vola, ary dia toy izany ireo be dia afaka mampihena. Ny halehiben'ny izany fankatoavana izany dia miankina amin'ny tahan'ny fidiram-bola sy ny habetsaky ny fikojakojana ny adidy sy ny ho tapa-kevitra ho an'ny raharaha tsirairay misaraka. Ny ankizy manana ny azy manokana tsy tapaka ny vola miditra na Fananana, dia mety hitarika ny fampihenana ny fikojakojana ny asa. Tsy ny fianakaviana, ny mpianatra, ny fianarana fanampiana na vola miditra avy amin'ny fohy ezaka Ferialtätigkeit ho voaisa araka ny raharaha lalàna. Ny fikarakarana ny zaza ny vola mpitrosa ny ray aman-dreny ao an-tsotra mazava ho azy fa ny fifandraisana tsara amin'ny ny haavon'ny ny bar, tsy misy fikojakojana. Araka ny raharaha lalàna ny fifandraisana ara-dalàna ny halehiben'ny roa andro isaky ny tapa-bolana (na ny andro iray isan-kerinandro) ary efatra herinandro ny fety ny fomba mahazatra. Ny fanao isan-taona araka ny contact, na izany aza, dia be kokoa, izany dia mety hitarika ho amin'ny toe-javatra ny olona iray raharaha, antonony fampidinana ny fisotroana ho an'ny zaza-bola ho an'ny fikojakojana. Be, ny tahiry tao an-trano ny tena fanaraha-maso ny ray aman-dreniny foana ny anjara ny, fa tsy ireo fandaniana (ohatra: ny vola lany ny fialan-tsasatra amin'ny dia lavitra), izay mahatonga ny vola miankina amin'ny ray aman-dreny.
Toy ny boky sarobidy (miankina amin'ny tsirairay ny raharaha mety ho nanofahofa) dia mampihatra ny fampihenana ny isan-jato ho an'ny fanampiny tsirairay isan-kerinandro Betreuungstag (na ny fampihenana ny isan-jato ny raharaha ny fikarakarana ny halehiben'ny iray ampahatelon'ny ny tontalin'ny fotoana).
Ny ny fanafoanana ny vola ho fikolokoloana ny adidy ao amin'ny fitsipika amin'ny tranga manokana ihany raha nikarakara sy mitaky ny tokotanin-tsambo mba ho zaraina, mizara ny soa koa eo amin'ny ray aman-dreny (ary samy momba izany koa manao vola be).
Anjara mitovy ny fikarakarana, raha tsy misy ray aman-dreny no tompon'andraikitra, fara fahakeliny, roa ampahatelon'ny ny fikarakarana ny tolotra.
Fitsipika ny fitantanana sy ara-teknika fahaiza-mitarika: Famaritana sy ny fahasamihafana
Muutus nimi - õiguslikke eeskirju, mis on mängu Nimi Muutus